Iibhokhwe - "isakhelo" ebusweni: eninzi kuxhomekeke kwimoko, ubuninzi kunye nombala. Ngoncedo lwamacwe enziwe ngokufanelekileyo, unako ukutshintshisa iimpawu zobuso uze ukhangele phambili ujonge iminyaka elishumi emncinci. Ngaba ilinga? Kakade. Iingcali zezobugcisa zithetha malunga nokuba njani kwaye zenzeni.
Indlela yokunyamekela iinki: iingcebiso zengcali
Qaphela kakhulu xa ushintsha isimo. Ngokumalunga neelishi, isalathiso esihle esidala "amaxesha asixhenxe asizame, omnye uyayinqumla". Musa ukukhohliswa yimikhwa emitsha, ungazami ukuklanywa kobugcisa, ungazondeli ngokubhala tattoo. Ukuthambekela kukudlulileyo, kwaye i-classic ingunaphakade: amaqabunga amancinci amancinci, ahlambulukileyo ayingxenye yentombazana enomtsalane.
Iingcamango zokuyila i-eyebrow ziyingozi
Umbala - obaluleke ngakumbi kunokuba ubonakala. Amaconco amahle - akusoloko amnyama (nangona ama-brunettes enkathazo ungenza ikhefu). Kodwa amaninzi amabhinqa abomnyama-mbilini-kunye nabasetyhini abafazi-abayi kulahlekelwa ngokukhetha i-brow-ithetha kwibala elimnyama. Iiflethi zeshokoleta ezibabalayo, i-taupa okanye i-sepia ziphela kwaye zifanelekile naziphi na iintlobo zokubonakala. Ukuze kube nempumelelo enkulu kulungele ukusebenza kunye nokutywala kunye neenwele zeebhola, ukhetha i-liner ephothiweyo kunye neepowder shadows.
I-Browser set Too ejongene nayo - ukulungiswa kweenki
Umnxeba omnyama okanye ipensela ye-eye-pencil. Ngokukhanya kwelanga okanye kwesikhumba esinyanyisiweyo, kunokukhupha imfucu emhlophe, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokuluhlaza, kudala ukuvakalelwa. Ukuba awukwazi ukuyeka umthunzi we-agate - sebenzisa ukhilimu, i-wax okanye i-aksovye kayaly: ukuthungwa kwabo kuzinzile.
Iikhrayoni ze-Givenchy - ukuze zime kakuhle
Fumana i-teethothrow ... malunga neelishi. Oku akusiyo ihlazo: abaculi abaphambili bawasebenzisa ngokukhawuleza ukuba "balula" umthunzi. Udinga i-brush encinci nge-softly crystals - khangela kuyo kumasebe omntwana. Yenza ipeyi zakho ipeyinti, uze udibanise ngobumnandi kunye nemigudu embalwa egqibeleleyo-ngoko umbala weenki ziza kukhangeleka ngokwemvelo.
Ibhulosi yamazinyo: i-brow-lifhak from stellar stylists
Iimfihlelo ze-Porcelain Leather: Inkqubo yokuNakekelwa kwe-Asia
Izindlela zokunyamekela izandla zakho ekhaya
8 iinkcukacha malunga nezifakelo esifubeni kunye neenqanawa ezifunekayo ngamnye umfazi
Imveliso yeyona tan
Inkukhu kwiviniga yebhasamu
Abafazi baseFransi bahluke njani kumaRashiya?
Bonisa umntu wakho
I-psychotype "I-Yesenin" - indlela yokuzibandakanya kunye nohlobo oluthambileyo